विन्डोज १० को लागि सफारी - आधिकारिक डाउनलोड उपलब्ध छ? - सफ्टवेयर
विन्डोज १० को लागि सफारी - आधिकारिक डाउनलोड उपलब्ध छ?
ब्राउजर बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको साथ, क्रोम, सफारी, र फायरफक्स अहिले करीव एक दशकको लागि शीर्षमा छ। अपरेटिंग सिस्टमको पर्वाह बिना धेरै प्रयोगकर्ताहरूको आफ्नै ब्राउजर छनौट गर्न कारणहरू हुन्छन्। एप्पलसँग एक विशाल फ्यानबेस छ, र प्रयोगकर्ताहरू प्रचार गर्न को लागी आफ्ना उत्पादनहरू प्रयोग गर्न को लागी प्रयोग गर्न चाहन्छन्।
धेरै प्रयोगकर्ताहरूले सफारीलाई उनीहरूको मुख्य ब्राउजरको रूपमा प्रयोग गर्छन्। यो मुख्यतया महान गोपनीयता र यो प्रस्ताव गर्दछ सुविधाहरूको कारणले हो। विन्डोजहरूको लागि सफारी लामो पछाडि रोकियो। यो ब्ल्गमा हामी तपाईलाई किन यसको कारण दिन्छौं।
विन्डोज १० को लागि सफारी - इतिहास
सफारी विन्डोसँग विन्डोजको साथ सुरु भएन। यसको पछाडि लामो कथा छ। डेभ हट एक ठुलो नाम हो जो मोजिला फायरफक्स र उसको पार्टनरको साथ आएका थिए, र तपाईले एप्पललाई ह्युम गरिसक्नु भएको थियो, यो स्पष्ट कुरा केहि ठूलो आउँदैछ भन्ने हो।
सफारी ब्राउजर पूर्ण गोपनीयता अन्तर्गत सिर्जना गरिएको थियो; कसैलाई केहि पनि थाहा थिएन, यो सबै लक ढोका पछाडि भयो, र जब यो बाहिर आयो, यसले ठूलो असर गर्यो। पूर्व कर्मचारीहरु सम्झना को रूप मा, कुनै सामान्य कर्मचारी लाई ती बन्द ढोका पछाडि के भइरहेको छ के बारे मा केहि पनि थाहा छैन; उनीहरूसँग ठूलो प्रभावको बारेमा कुनै संकेत थिएन जुन सिर्जना हुँदैछ।
सफारी मुख्य रूपमा सबै एप्पल उपकरणहरू समर्थन गर्न सिर्जना गरिएको हो, तर त्यसपछि तिनीहरूले विन्डोजको लागि ब्राउजर पनि जारी गर्‍यो। २०० In मा, सफारी विन्डोजमा पनि पहुँचयोग्य थियो। विन्डोजमा सफारीको विमोचन पछाडि मुख्य कारण भनेको इन्टरनेट अन्वेषकलाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा दिने थियो, शीर्ष ब्राउजर त्यतिबेला।
१० सर्वश्रेष्ठ आइट्यून्स विकल्पहरू
विन्डोजको लागि सफारी कसरी डाउनलोड गर्ने?
विन्डोजहरूको लागि सफारी डाउनलोड गर्दै रकेट विज्ञान होईन। यो वास्तवमै सजिलो छ, र मैले तपाईंलाई भन्नुपर्दछ कि, एकचोटि डाउनलोड भएपछि तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न धेरै सजिलो पाउनुहुनेछ। हामीले तपाईंलाई सफारी डाउनलोड गर्नका लागि लिंक प्रदान गरेका छौं।
तपाईं मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ लिंक यसलाई स्थापना गर्न सफ्टवेयर चलाउनुहोस्।
विन्डोज को लागी सफारी - पहिलो उपस्थिति
हामी जान्दछौं कि एप्पलको राम्रो फ्यान फॉलोइंग छ, र यदि उनीहरूले भविष्यमा के हुँदैछ भन्ने सानो स get्केत प्राप्त गरे पनि, उनीहरू हाइप अप हुनेछन्। यद्यपि सफारीको लागि त्यो त्यस्तो थिएन। दर्शकहरूलाई प्रस्तुत गर्नु अघि यो निजी रूपमा काम गरिएको थियो। २०० 2007 मा, स्टीव जॉब्सले आधिकारिक रूपमा Windows XP र Windows Vista को लागि सफारी सुरू गर्ने घोषणा गर्‍यो। नयाँ बजारमा प्रवेश गर्न यो एक ठूलो पहल थियो, जहाँ त्यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ।
यो जान्न साँच्चै रमाईलो छ कि दर्शकहरूले सफारीलाई खुशीको साथ स्वीकार गरे। तिनीहरू एप्पलको लागि हाइपको बारेमा जान्न उत्सुक थिए र ब्राउजर प्रयोग गर्न चाहन्थे। यो प्रकाशित भएको मिति ११ जुन २०० 2007 थियो। जे होस्, मे २०१२ मा, तिनीहरूले विन्डोजहरूको लागि सफारीलाई समर्थन गर्न बन्द गरे। यहाँ ठूलो प्रश्न भनेको के यो विन्डोजमा सफारी प्रयोग गर्न अझै सम्भव छ? तपाईं यो सम्पूर्ण लेख पढे पछि थाहा पाउनुहुनेछ।
सफारी ब्राउज़र - लाभ र हानि
जे भए पनि समीक्षा वा जाँच गरिए जस्तो छैन, प्रयोगकर्ताहरू सँधै फाइदाहरू र बेफाइदाहरू जान्न चाहन्छन्। यो कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन कि सफारीले पनि आफ्नै फाइदाहरू र बेफाइदाहरूको सेट पायो। विन्डोजको लागि सफारीको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यसको 5th औं संस्करणको साथ आयो। उनीहरूले एउटा यस्तो सुविधा पाए जहाँ समाचार पढ्न सम्भव भएको थियो। तिनीहरूलाई कस्टम विस्तारहरूको लागि अनुमति दिईएको छ, यसलाई फायरफक्ससँग नजिकबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने एक ब्राउजर बनाउने।
यद्यपि सफारी डाउनलोड गर्न धेरै कम समय लिन सक्दछ, र साथै यसलाई डाउनलोड गर्न सजिलो छ। सफारीका अन्य सुविधाहरू उनीहरूको ईमेल वा मुद्रण ईतिहासको सुविधा हुनेछ। उनीहरूसँग ब्राउजरमा जाभास्क्रिप्ट ईन्जिन छ, जुन क्रोम जत्तिकै छिटो र दुई पटक फायरफक्स वेगमा छ।
तिनीहरूले पनि तपाईंको लागि विज्ञापन ब्लक गर्न समर्थन एड हरूलाई अनुमति दिन्छ। यद्यपि विन्डोजको लागि सब भन्दा शीर्ष फिचर सफारी प्लगइनहरू र विस्तारहरू प्रयोग गर्ने क्षमता थियो। त्यहाँ बेफाइदाको बारेमा कुरा गर्ने धेरै कुरा छैन; सबैभन्दा ठूलो नुकसान एप्पल विन्डोजहरूको लागि सफारी ब्राउजर बन्द गर्दैछ। क्रोम र फायरफक्स जस्ता अन्य ब्राउजरहरू पूर्ण रूपमा काम गर्दैछन्, र तपाईं तिनीहरूलाई नियमित अपडेटको साथ उत्कृष्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
विन्डोजको साथ सफारी यात्राको अन्त्य!
सफारीले विन्डोजको साथ किन भाग गर्नुपर्‍यो भनेर जान्न साँच्चिकै गाह्रो छ; त्यहाँ धेरै हल्लाहरू छन्, धेरै धारणाहरू छन् कि अवस्थित छन्। कोही भन्छन् कि किनकी एप्पलले बजारमा विद्यमान ब्राउजरहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन, जबकि अन्यले भने यो प्रयोगकर्ताहरूलाई म्याकोसतिर आकर्षित गर्ने थियो, जुन असफल भयो। एप्पल विन्डोज मार्केटमा सफल भएन भन्ने कुराको बाबजुद पनि, यो ज्ञात छ कि सफारी गति र गोपनीयतामा केन्द्रित एक अद्भुत ब्राउजर हो।
म्याक समीक्षाका लागि सफारी:
एप्पलको निर्मित ब्राउजरहरू, सफारी एक अग्रणी र प्रसिद्ध ब्राउजरहरू मध्ये एक हो। यो २०० 2003 मा विमोचन भएदेखि नै सेब उपकरणका लागि मानक ब्राउजरको रूपमा सेवा गर्दै आएको छ। एप्पलसँग गोपनीयता मामिलाहरूको लागि धेरै सफा ट्र्याक रेकर्ड छ, र सफारी धेरै जस्तो प्रयोगकर्ता-मैत्री ब्राउजर नहुन सक्छ, तर यसले तपाईंलाई सही दिन्छ। गोपनीयता तपाईंलाई आवश्यक छ।
सफारीसँग धेरै सुविधाहरू छन्, तर सबैभन्दा ठूलो कन्न यो हो कि यो हाल एप्पल उपकरणहरूमा मात्र उपलब्ध छ। यो प्रयोगकर्ता द्वारा प्रदर्शनको लागि उत्कृष्ट रेटिंग्स दिइएको छ। सफारीसँग पनि महान सुरक्षा र गोपनीयता सुविधाहरू छन्, जसले यसलाई एक विश्वसनीय ब्राउजर बनाउँछ।
१ क्यू के म विन्डोजमा सफारी डाउनलोड गर्न सक्छु?
बर्ष:हो, तर तपाईं सफारीको 5th औं संस्करण मात्र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ नवीनतम संस्करण होईन।
२Q के सफारी विन्डोजको लागि नि: शुल्क छ?
बर्ष:हो, विन्डोजहरूको लागि उपलब्ध संस्करण संस्करण5हो, जुन प्रयोगकर्ताहरूको लागि निःशुल्क हो।
3Q। के सफारी विन्डोज सुरक्षित छ?
बर्ष:सफारीको मुख्य फोकस प्रयोगकर्तालाई अन्तिम गति र गोपनीयता दिनेमा थियो; क्रोम विपरीत, जससँग अत्यधिक सुविधाहरू छन्, सफारीले लगातार गति र गोपनीयता प्रदान गर्दछ।
विन्डोजको लागि सफारी एक उत्तम विकल्प हो यदि तपाईं एक साधारण यूजर इन्टरफेसको साथ ब्राउजर चाहानुहुन्छ जसले तपाईंलाई महान गोपनीयता र गति दिन्छ। विन्डोजमा म्याकोसबाट स्विच गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले सफारीलाई उत्कृष्ट ब्राउजरको रूपमा प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्दछन्। विन्डोजहरूको लागि सफारीको बारेमा बढि जान्नको लागि तलको च्याट बक्समा तपाईंको प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। हामी तपाईंको प्रतिक्रिया र सुझावहरूको लागि पनि खुला छौं।
विन्डोज १० का लागि क्रोमकास्ट
१० नि: शुल्क बीट बनाउने सफ्टवेयर
Minecraft अनब्लक - कसरी स्कूलहरूमा खेल्ने?
नि: शुल्क नेटफ्लिक्स खाताहरू २०२० | उत्तम तरिका
शीर्ष निःशुल्क चलचित्र स्ट्रिमि sites साइटहरू
नि: शुल्क xbox कुनै सर्वेक्षण छैन
टिभी हेर्नुहोस् अनलाइन नि: शुल्क वेबसाइटहरू
mx3 android टिभी बक्स समीक्षा
एमपी3प्लेयरमा यूट्यूब कन्भर्टर